Wasiirka: Jarmal kasta waa la tallaali doonaa, waa la daaweyn doonaa ama wuu dhiman doonaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Wasiirka: Jarmal kasta waa la tallaali doonaa, waa la daaweyn doonaa ama wuu dhiman doonaa
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka caafimaadka Jarmalka Jens Spah
Sida laga soo xigtay wasiirka, qof kasta oo dalka ku nool ayaa la tallaali doonaa ama u dhiman doonaa coronavirus bilaha soo socda.
Wasiirka caafimaadka Jarmalka Jens Spahn, ayaa maanta ku booriyay qof walba in la tallaalo, laakiin waxa uu ka shakiyay in tallaalada laga dhigo mid qasab ah. Wasiirka ayaa sheegay in la gaari doono xasaanadda xoolaha, “ma jiro talaal khasab ah oo jabin doona mowjaddan” caabuqyada.
"Malaha dhammaadka jiilaalkan, sida mararka qaarkood si caqli-gal ah loo yiraahdo, qof walba oo Jarmalka ku nool waa la tallaali doonaa, waa la daweyn doonaa ama wuu dhiman doonaa," ayuu yiri Spahn.
Spahn wuxuu jeediyay faallooyinkiisa isagoo ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta hormuudka ah, oo ay ku jiraan kuwa ka socda Chancellor Angela Merkel's Christian Democratic Union (CDU), ayaa ku baaqayay amar tallaal oo loogu talagalay dhammaan muwaadiniinta iyada oo ay sii kordhayaan caabuqyada COVID-19.
Madaxweynaha Bavaria, Markus Soeder ayaa sheegay Jimcihii todobada maalmood ee heerka caabuqa-dhacdooyinka infekshanka "ayaa ka dhex toogtay saqafka" kuwa aan la tallaalin.
"Waxaan aaminsanahay in dhamaadka, aanan ka gudbi doonin waajibaadka tallaalka guud," ayuu yidhi.
Dood la mid ah ayaa dhawaan la adeegsaday hoggaamiye kale oo Yurub ah, Raiisel wasaaraha Hungary Viktor Orban. Isagoo la hadlayay idaacada Kossuth jimcihii, wuxuu si xun u weeraray anti-vaxxers, isagoo ku tilmaamay hanjabaad wuxuuna yiri "ay ogaan doonaan inay ama la tallaali doonaan ama ay dhiman doonaan."
MacPheat ma noqon doonaa wuxuu leeyahay,
Nofeembar 22, 2021 at 18: 02
1. "talaalada" kuma siinayaan difaac waxayna u muuqdaan kaliya 6 bilood.
2. Waxay ahayd dhacdo caan ah ka hor covid-19 waxaana la aqbalay inay ku dhacayso tallaalada covid-19 in tallaalka aan difaaci karin uu ku dhiirigaliyo fayrasku inuu isu beddelo qaabab badan oo fayras ah.
3. Markaa waa tallaalada kaxeeya masiibada ee maaha kuwa aan la tallaalin.
4. Waxa kale oo hadda si cad loo dejiyay in la ilaaliyo heerka dhiigga ee 50 nanograms halkii millilitar ee fitamiin D ay gebi ahaanba meesha ka saari doonto suurtagalnimada jirro halis ah ama dhimasho ka imanaysa covid-19.
5. Ilaa hadda ma hayno si aan ku ogaano waxyeelada ay leeyihiin tallaaladu. Si kastaba ha ahaatee waxaa cad in dadku ay u dhinteen iyaga oo laga yaabo in ay ka badan yihiin inta aan ka warqabno iyo in dadku ay la ildaran yihiin dhibaatooyin caafimaad oo iyaga ka mid ah.
6. Dhammaan tani waxay noqon kartaa mid la aqbali karo haddii aysan jirin beddelka raqiis ah oo badbaado leh.
Beddelkaani waa fitamiin D. Waxa loo baahan yahay in la sameeyo labadaba warbaahinta iyo maamulka caafimaadka dadweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in qof walba uu sare u qaado heerka fitamiin D-ga. Waxayna tani la macno tahay qaadashada 4,000 ilaa 10,000 IU's maalintii.